Maxkamadda Ciidanka oo xukun ku ridday rag loo heysto qarax sanadkii hore ka dhacay Wadajir – XAMAR POST
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil iyo xabsi daa’in isugu jira ku ridday rag loo heysto weerarkii November 2018kii ka dhacay Isgoyska Kaawo Godeey ee Degmada Wadajir.
Raggan oo Maxkamadda ay kiiskooda dhegeysatay 5tii Bishan ayaa waxaa maanta lagu xukumay dil, halka mid ka mid ah lagu xukumay xabsi daa’in kan kalena siideysay Maxkamadda.
Maxkamada darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ayaa saaka xukun dil toogasho ah ku ridday Xasan Cali Macalin Barre halka xabsi daa’in ay ku riday Sayid Cali Aadan Nuur oo lagu helay inay ka dambeeyeen Qaraxii ka dhacay xaafada Kaawo godey ee degmada Wadajir 26 November sanadkii hore. maxkamada ayaa sii daysay Muxudiin Maxamed Axmed oo lagu waayay dambigaas.
Raggan ayaa loo heystaa in ay ka dambeeyeen qarax Bishii Novermber ee sanadkii hore ka dhacay Isgoyska Kaawo Godey ee degmada Wadajir halkaas oo ay ku dhinteen 12 qof 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Dadka ku geeriyooday Dhame Maxamed Muxiddiin Abooreyste iyo hooyadiis, Xeer ilaalinta ayaa sheegtay in Qaraxa uu sameeyay Sayid Cali oo ka mid ah eedeysanayaasha islamarkaana eedeysanaha 1aad oo uu abti u yahay u dhiibay.